कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: कीर्तिपुरको कभर्ड हल कीर्तिपुरको शान कि घाँडो ?
कीर्तिपुरको कभर्ड हल कीर्तिपुरको शान कि घाँडो ?
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.१०स्थित नयाँबजारमा कीर्तिपुर प्रवेश गर्ने बितिक्कै कभर्ड हल देखिन्छ । जुन कभर्ड हलले १३ औं साग खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय खोखो खेल खेलाउने अवसर प्राप्त गरेको थियो । खेल प्रदर्शन भारतीय टेलिभिजन लगायत विश्वका धेरै टेलिभिजनले कीर्तिपुरको नाम लिई खेलकुद समाचार प्रशारण गरेका थिए । जसले गर्दा विश्वमा छरिएर रहेका कीर्तिपुरवासीले गर्वको अनुभव गरेका थिए ।
कीर्तिपुरको शानको रुपमा रहेको कीर्तिपुर कभर्ड हल १३ औं सागपछि खेलकुद संचालन भएको छैन । कभर्ड हललाई कीर्तिपुर नगरपालिकाले लकडाउनको अवस्थामा राहत सामाग्री संकलन गर्ने गोदाम घरको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । अहिले त्यही कभर्ड हलको पछाडि पट्टि फलामको शटर हालेर भाडामा दिन लागेको छ । जसले गर्दा दुई वर्ष पहिले मात्र बनाउन सम्पन्न भएको पेटी र रेलिंग हटाएर तरकारी बजार राख्न लगाउने नगरपालिकाको योजना रहेको छ । अहिले बन्न लागेको बेलामा विरोध सुरु भएको छ । तर नगरपालिकाले विरोधको वास्ता नगरी धमाधम पिलर राख्न थालेका छन । के यो जायज छ ? सुरुका दिनमा १० नं का वडाध्यक्ष अमन महर्जनसँग सोध्दा थाहा छैन भन्नुभयो । त्यस्तै कीर्तिपुर खेलकुद विकास समाजका अध्यक्ष प्रदिप महर्जनसंग सोध्दा पनि थाहा छैन भन्नुभयो । त्यसपछि नयाँबजा क्लब काअध्यक्ष ईश्वरमुनी बज्राचार्य संग सोध्दा बल्ल उहाँले कभर्ड हल संचालन गर्न खर्च निकाल्नको लागि नगरपालिकाले शटर बनाएर तरकारी बजारको लागि भाडामा दिन लागेको भन्ने जानकारी दिनुभयो । अनि कभर्ड हल संचालन कसले गर्छ भन्दा ईश्वरलाई थाहा छैन भन्नुभयो ।
यो जग्गा कीर्तिपुर नगरपालिकाको होइन । कीर्तिपुरका जनताले त्रि.वि.सँग खेलकुदको लागि आपसी समझदारीमा लिएको थियो । यहाँ बास्केटवल कोर्ट बनाउँदा त्रि.वि.का क्याम्पसचिफ महेश दाहालले यो जग्गा त्रि.वि.कै हुनेछ । खेलकूद कोर्ट बनाएर खेल्न दिन्छौं । तर व्यापार गर्न पाइन्दैन । व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न पाउँदैन भन्नु भएको थियो । अब आएर कीर्तिपुर नगरपालिकाले नै शटर राखेर भाडामा दिई कमाउन थाल्यो भनेर त्रि.वि.ले फिर्ता माग्यो भने दिने कि नदिने ? एकातिर त्रि.वि.ले पेट्रोल पम्प, बैंक, नर्सरी आदिलाई भाडामा दिएर व्यापार गरी रहेको छ भनेर हामी विरोध गर्ने अहिले हामीले नै व्यापार गर्ने ? यो गर्न हाम्रो नैतिकताले दिंदैन त्यसैले यो शटर बनाएर भाडामा दिने काम तुरुन्त बन्द गर्नुप¥यो।
कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक पत्रिकामा खेलकूद स्तम्भ अन्तरगत कीर्तिपुरमा हुने विभिन्न खेलकुदको समाचार प्रकाशित हुन्छ । दुई वर्ष पहिलेसम्म स्व.नविन महर्जनले खेलकुद स्तम्भ लेख्नु हुन्थ्यो भने उहाँको देहावशान पछि प्रदिप महर्जनले लगातार लेख्दै आइरहनु भएको छ ।
त्यसकारण कीर्तिपुरको खेलकुद इतिहासको बारेमा मलाई पनि केही जानकारी छ । ऐतिहासिक नगर कीर्तिपुर खेलकूद कृयाकलापमा पहिलेदेखि नै राम्रो गतिविधिहरु गर्दै आएको र क्षमतावान खेलाडीहरु तयार गर्दै राष्ट्रलाई पनि खेलजगतबाट टेवा पु¥याउँदै आएकोमा दुईमत नहोला । तत्कालिन समयमा विशेष गरेर भलिवल, पूmटवल, टेबलटेनिश, एथलेटिक्स, चेस, ब्याडमिण्टन, मार्सल आर्टस, वास्केटवल जस्ता खेलहरुका प्रतिभावान खेलाडीहरु उत्पादन गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला खेलकूद गतिविधि गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरु प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गत भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दै जानेक्रममा त्यहाँ भएको खेलकूदका पूर्वाधारहरु मासिंदै गए भने त्रि.बि.मा भएको फुटवल मैदान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनायो । त्यहाँ फुटवल खेल्न दिइएन । फलस्वरुप कीर्तिपुरमा खेलकूद गतिविधिहरु विशेष
गरी फुटवल, वास्केटवल, टेवल टेनिस, ब्याडमिन्टनका गतिविधिहरु शुन्य अवस्थामा झ¥यो । कीर्तिपुरको अहिलेको मैदान पहिले बस स्टपको रुपमा संचालन गर्दै आएको ठाउँ हो । वि.सं.२०६१ सालमा कीर्तिपुरको समग्र खेलकूद क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले कीर्तिपुर खेलकूद विकास समाजको स्थापना भयो । जसको अध्यक्ष प्रदिप महर्जन र महासचिवमा स्व.नविन महर्जन हुनुहुन्थ्यो । यो समाजले प्रतियोगिता र पूर्वाधार तयार गर्ने दुईटा काममा जोड दिएको थियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि त्रि.वि.ले वसपार्क भनि छाडेको र नयाँबजार क्लबले गाडेको वास्केटवल पोल भएतिर नै कीर्तिपुर सामुदायिक वास्केटवल कोर्ट एवं खेल मैदान निर्माण गर्न २०६५ साल जेठ ३ गते कीर्तिपुरका खेलाडी, खेलप्रेमी बुद्धिजिवीहरुको उपस्थितिमा निर्णय गरी खेलकूद विकास समाज अगाडी बढेको थियो ।
सो जग्गा त्रि.वि.को भएको कारण पहिले नयाँबजार क्लबले वास्केटवल कोर्ट बनाउन पोल गाड्दा त्रि.वि.ले रोकेको थियो । त्यसैले खेलकूद समाजले कीर्तिपुरका राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरी एक दवाव समूह बनाएको थियो । पछि यसै समूहलाई नै नगरस्तरीय खेलकूद मैदान उपभोक्ता समिति गठन गरी काम अगाडि बढायो । यसको लागि कीर्तिपुर नगरपालिका लगायत यहाँका खेलप्रेमी, खेलाडीहरुको आर्थिक सहयोगको कार्य थालनी गरेको थियो । यस अभियान अनुसार कीर्तिपुरको खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरुबाट कूल १५ लाख जति आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट रु.१० लाख र मैदान सम्याउन डोजर सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
२०६६ सालको सुरुवाती समयदेखि नै कोर्ट तथा खेल मैदान निर्माण थालेको थियो । यस वीचमा पनि त्रि.वि.ले भौतिक निर्माण कार्य रोक्न पटक पटक पत्रहरु पठाए पनि वास्ता नगरी एक वर्षभित्र वास्केटवल कोर्ट जनसहभागितामा निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसपछि फुटवल मैदान निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय खेलकूद परिषद, जिल्ला खेलकूद विकास समिति मार्फत २०६७÷०६८ साल र पटक पटक गरी १० लाख रुपैया अनुदान प्राप्त भई हालको स्थितिसम्म ल्याउन सफल भएको थियो । त्यहीबेला त्रि.वि.ले अस्पताल निर्माण गर्न सर्भे गर्न पठाएको थियो । स्व.नविन महर्जनको अगुवाईमा सर्भे टोलीलाई भगाएको थियो ।
कीर्तिपुर खेलकूद विकास समाजको लक्ष वास्केटवल कोर्टलाई कभर्डहलमा परिणत गर्ने थियो । जसअनुसार विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा पत्र व्यवहार एवं योजना पेश गर्ने कार्य जारी थियो । संयोगको
कुरा २०७४ सालमा कीर्तिपुर क्षेत्रका सांसद राजेन्द्र के.सी. खेलकूद मन्त्री भएको बेला कीर्तिपुरमा कभर्ड हल बनाउन प्रश्ताव राख्दा उहाँले स्वीकार गर्नु भै आ.व.२०७४/०७५मा २ करोड विनियोजन गर्नु भएको थियो । यसको आधारमा कभर्ड हल निर्माण गर्न असार मसान्त भित्र माटो परीक्षण, नक्सा निर्माण र टेण्डर आह्वान बाहेक अरु काम गर्न भ्याइएन र बाँकी पैसा फ्रिज भयो ।
त्यसपछि पुनः ई.राजु श्रेष्ठको पहलमा सो हल निर्माणको लागि रु.५० लाख विनियोजन भएकोबाट काम सुरु भैरहेको थियो । झण्डै ८÷९ महिना काम रोकेर पुनः सुरु भैरहेको अवस्थामा १३ औं दक्षिण एशियाली खेलको लहर चलिरहेको अवस्थामा कीर्तिपुरमा पनि एउटा खेलको भेन्यू राख्ने निर्णय भएपछि राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवालको पहलबाट निरन्तर बजेट विनियोजन भए पछि २०७६ मंसिर पहिलो साता कीर्तिपुरको पहिलो कभर्ड हलको निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसपछि कीर्तिपुरमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो ।
यसरी दुःख गरेर कभर्डहल निर्माण गर्नु भएका समाजका अध्यक्ष प्रदिप महर्जनसँग यो शटर बनाउन एकचोटि पनि सोधेन । अलिकति खाली ठाउँमा बगैंचा बनाएर या रुख रोपेर हरियाली बनाउनु पर्ने उहाँको
धारणा रहेको छ ।
Posted by kirtipur.com.np at 4:56 PM